लकडाउनमा करोडपति आमाबुबा घरनिकाला, औषधी खाने पैसा नभएपछि धर’धरी रोए (भिडियोसहित)
May 19, 2020 1134
वौद्धको चिनचुलीका ६२ वर्षका राम’प्रसाद हुमागाई र वशन्ती हुमागाईलाई आफ्नै परिवारका सदस्यले घर निकाला गरेपछि बिचल्ली परेका थिए । आफ्नो सन्तान नभएपछि दाजुभाईको छोरावु’हारीको आश्रयमा बसेका उनीहरुलाई घर निकाला गरिदि’एपछि बिचल्ली भएको थियो । आफ्नो करोडौं रुपैया पर्ने घरवास हुँदा पनि उनीहरु अ’हिले सडकमा आएका छन् ।
घर परिवारका सदस्यले छोराछोरी छैनन् भन्दै आफुहरुलाई हेला गर्ने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुको बारेमा भि’डियोमा स’माचार सार्वज”निक भएपछि तिनै छोरावुहा’री अहिले आमावुवालाई लिन आएका छन् । ति वृद्ध आमाबुवाले आफ्ना छोरा’वुहारीले आफुहरुलाई कुट’पिट गर्ने गरेको बताए । वृद्धवृद्धाले सड”कमा मागेर जिवन गुजारा गर्ने गरेका थिए ।
करोडौंको सम्पत्ती र निकै ठूलो घर भएपनि परिवारका सदस्यले निकालेपछि उनीहरु काठमा’डौंमा कोठा भाडा लिएर बसेका थिए । भिडियो सार्वजनिक भएपछि सहयोगीले दिएको पै’साले कोठाभाडा तिरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
छोराछोरीले आफुहरुलाई बिरामी हुँदा पनि खान नदिने र यातना दिने गरेका कारण बस्न नसके’को बताएका छन् । ससु’राले बनाएको घर भएकाले सबै परिवार संगै बस्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
तीन चुलकिो वडा नम्बर ३ मा बस्दै आएका उनीहरु’लाई घरवेटीले कोरोना सर्छ भनेर निकालेपछि उ’नीहरु सडकमा आए । त्यस्ता वृद्धलाई सडकमा अलपत्र परेको देखेपछि अन्य छिमेकीले उनीह’रुलाई बस्ने ब्यवस्था मिलाइदिएका हुन् ।
मयुरको प्वाँख बेचेर जिवन चलाउँदै आएका उनीहरु आमा बसन्ती पनि दमको रोगी र वृद्ध रामप्र”साद पनि लडेर वि’रामी भएपछि उपचार पनि गर्न सकेका छैनन् ।
लकडाउनका कारण” कतै बाहिर पनि निस्कन नपाउँदा थप विचल्ली भएको हो । यसरी घर वाहिर बसेको ६ वर्ष भन्दा बढी भएको बताए । मयुरको प्वाँख बेचेर आएको सानो आम्दा’नीले जिवन गुजा’रेका उनीहरुलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्दै युटुवरले भि’डियो सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस…
Prevकाखे बालक छोडेर हराएकी रुपा बल्ल भेटिइन्, कहाँ बसेकी थिइन्? खोलिन् सबै कुरा (भिडियोसहित)
Nextकोरोना खोपको परिक्षण सकारात्मक भएपछि खुसीको सञ्चार, अब थप मानिसमा लगाइने
ह्वात्तै घट्याे सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
खुमन अधिकारीलको यसपालिको तीज गीत भयो भाइ’रल…